Umthengi-Kuqala nge-E-Commerce: Izisombululo zeSmart zale Nto Awunakho ukufikelela kuyo ukuze ungalunganga | Martech Zone
Ixesha lexesha lobhubhane kwi-e-commerce lize nokutshintsha komthengi kulindelo. Nje ukuba ukongeza ixabiso, iminikelo ekwi-Intanethi ngoku iyeyona ndawo iphambili yokufumana abathengi kwiimpawu zentengiso. Kwaye njengeyona faneli iphambili yokunxibelelana kwabathengi, ukubaluleka kwenkxaso yabathengi ebonakalayo kukuhlala kuphezulu ngalo lonke ixesha.
Inkonzo yabathengi ye-e-commerce iza nemiceli mngeni kunye noxinzelelo olutsha. Okokuqala, abathengi basekhaya bachitha ixesha elininzi kwi-Intanethi ngaphambi kokuba benze izigqibo zokuthenga.
I-81% yabaphenduli baphande imveliso yabo kwi-intanethi ngaphambi kokuba bathathe isigqibo sokuthenga. Elo nani limele ukonyuka okuphindwe kane ukusuka kwi-avareji yangaphambi kobhubhane ye-20% kuphela. Ukongeza, uphononongo lufumanise ukuba abathengi ngoku bachitha umndilili weentsuku ezingama-79 beqokelela ulwazi kwi-Intanethi ngaphambi kokuba bakhethe imveliso okanye inkampani kwizigqibo zabo zokuthenga.
umthombo: GE Inkunzi
Kwihlabathi eliya lixhuma kwaye linomdla, amava abathengi kumele ibe yeyona nto iphambili iphambili kwinkampani. Emuva ngo-2017, phantse 93% yabathengi uthe uphononongo lwe-Intanethi luye lwanefuthe kwizigqibo zabo zokuthengisa-ixesha elininzi ezandleni zethu kunye nentengiso eyenzeka kwizikrini zethu, elo nani lenyukile. Abathengisi abanakuphinda baxhaphaze amava abathengi kwi-Intanethi. Ukuqinisekisa intsebenzo elungileyo, enyanisekileyo ayisiyoqhinga lokuthengisa, sisicwangciso-qhinga sokusinda. Kwaye kubaluleke ngakumbi kwiminyaka yobudala be-COVID.
Apha ngezantsi zikho izicwangciso zenkonzo yedijithali ezimbalwa ezifunwa ngumthengisi ngamnye oqinisekileyo.
Itekhnoloji yokuKhawulezisa okungcono: Kuba ixesha yinto yonke
Imilinganiselo ye-Intanethi ngokukhawuleza. Sinokusetyenziselwa ukudibanisa kumaziko amakhulu okuthenga, kodwa akukho mntu ufuna ukulinda ajikeleze inkxaso ebonakalayo. Oku kuzisa umqobo okhethekileyo kubathengisi be-e-commerce, abangakwaziyo 'ukuvala iingcango ezibonakalayo' xa iwotshi ibetha nge-7 ngokuhlwa.
Ukuphelisa amaxesha okulinda okwenyani kunye nokusingatha le mfuno intsha yexesha, abathengisi bajike ngokungathandekiyo kwiincoko zencoko kwisisombululo seenkonzo zabathengi. Iincoko zisebenzisa ubukrelekrele bokuzibandakanya ukuze uzibandakanye ngokubonakalayo nabathengi, nokuba kungumbhalo, ukuthumela imiyalezo ngephepha lewebhu, okanye ngomnxeba. Inqanaba lokwamkelwa kweengxoxo zanyuka kulo lonke ubhubhane, njengoko abathengisi babona ukuba ulawulo lwabathengi oluzenzekelayo luyanciphisa iindleko zabo zokusebenza. Iincoko zinika iindlela ezilungelelanisiweyo zokuqokelela intlawulo, ukuqhubekeka kweeodolo okanye ukubuyisa, kunye nokunceda abathengi abanomdla-konke ngaphandle kokuphosa ukubetha.
Ngesi sizathu, Ingxelo yakutshanje ye-Business Insider ayifanele isothuse. Baxele kwangaphambili ukuba ukuthengisa abathengi ukuchitha ixesha lengxoxo kwihlabathi liphela kuya kufikelela kwi-142 yezigidigidi kwiminyaka emithathu ezayo. Bafumanise ukuba malunga ne-40% yabasebenzisi be-Intanethi ngokwenyani ukhetha ukunxibelelana neengxoxo ezingaphezulu kwezinye iinkqubo zenkxaso ezinje ngeearhente ezibonakalayo.
Itekhnoloji yamava aHlanganisiweyo: Umgangatho oMtsha woMthengi
E-commerce yahlukile kuba inokwenzeka naphina. Amabhanti awanakuhlala ethemba ukuba abathengi bahleli ekhaya phambi kweemonitha ezikhulu kunye newebhusayithi yabo eboniswe ngokugqibeleleyo. Rhoqo, abathengi banxibelelana newebhusayithi yohlobo lophawu kwifowuni ephathekayo embindini wemihla ngemihla yemisebenzi. Kodwa idatha eqokelelwe nguStatista bonisa ukuba kuphela yi-12% yabathengi abajonga amava abo orhwebo olusebenzayo alula.
Intshukumo ebonakalayo ibeka uxinzelelo olutsha kubathengisi ukuze baphucule amava abo abathengi kuzo zonke iindawo zonxibelelwano zabathengi, kwaye xa kufikwa kwiselfowuni, ngokucacileyo kukho umsebenzi ekufuneka wenziwe. Kodwa abathengisi abaqhubekile nokutyala imali kwi-CRM (kulawulo lobudlelwane babathengi) kwizisombululo bazifumene bekwimeko engcono yokulawula le mfuno yexesha le-COVID. Iiplatifomu zeCRM ezihlanganisiweyo zivumela abathengisi ukuba balawule amava abo abathengi kuzo zonke iindlela, ukudibanisa idatha yabo yokugcina kunye nokuthengisa kwabo kwi-Intanethi, unxibelelwano lwabo lwengxoxo, ukuzibandakanya kwabo kwimidiya yoluntu kunye neziphumo zabo zephulo le-imeyile.
Olu ncedo aluniki kuphela amava abathengi anokuthenjwa, apho idatha yabo igcinwa ikhuselekile kwaye ihlala ihleli kwiindawo ezininzi zokuchukumisa, kodwa ikwanayo nesibonelelo esongeziweyo sokufaka yonke idatha ebalulekileyo kwindawo enye. Ukuthengwa kwedatha okuzenzekelayo kwiminyhadala emininzi kunokuhlengahlengiswa kwiqonga elinye; ii-odolo zigcwaliswa ngokukhawuleza, imbuyekezo iqhutywa ngokufanelekileyo, kwaye abanini banayo yonke idatha abanokuyicela ukuxhobisa intengiso yabo.
Itekhnoloji yoThengiso oluJolisiweyo: Oko sikwaziyo ukuza kuthi ga ngoku
Xa kuninzi ukusasazwa kwedatha, abathengisi bedijithali bazama ngeendlela ezimbalwa ezahlukeneyo. Phakathi kwezicwangciso zokuphumelela ukuza kuthi ga ngoku ukwamkelwa kwenyani eqinisekisiweyo. Inyaniso engathandabuzekiyo (i-AR) isombulula eyona ngxaki iphambili ye-COVID: ndiyithemba njani imveliso ukuba andiyiboni ivenkile? Ngokukhawuleza, amaqela okuthengisa akrelekrele asifumene isisombululo. Amava e-AR anokulinganisa ukubonakala kwefanitshala kwigumbi lokuhlala, ubungakanani bepanty kwisakhelo esithile, umthunzi welipstick ebusweni bomthengi.
I-AR ikhupha uqikelelo kwivenkile ekwi-Intanethi, kwaye sele ibonelela abathengisi ngembuyekezo emangalisayo; Abathengisi abanonxibelelwano, ukuboniswa kwemveliso ye-3D baxele i-40% yenqanaba lokuguqula eliphezulu. Ukwenza ukubheja okukhuselekileyo abathengisi abayi kufuna ukwahlukana nokuthengisa kwabo okuphezulu nangaliphi na ixesha kungekudala, I-Statista iqikelele ukuba intengiso yokwenyani eyongeziweyo iya kufikelela kubasebenzisi abayi-2.4 yezigidigidi ngo-2024.
Okokugqibela, amaqela okuthengisa akrelekrele athembele ngakumbi kubuntu njengecebo eliphambili lokuthengisa, kwaye kunjalo ngokufanelekileyo. I-e-commerce ibonelela ngento enye esingenakuze siyenze kwiivenkile: wonke umntu othenga kwi-Intanethi 'unokuhamba' kwindawo eyahlukileyo egcinwe ngaphambili. Ukwenza izindululo ngeemveliso kukhetho lwe-shopper ekwi-Intanethi kukonyusa amathuba okuba abathengi bafumane into ebabamba ngokukhawuleza. Ukwenza iminikelo ebhalwe igama lakho kuthetha ukusebenzisa idatha kuthengiso lwangaphambili lwebrawuza kunye nomsebenzi wesiza ukuqikelela incasa yabo; omnye umsebenzi osele ufumaneke ngakumbi ngamagunya obukrelekrele bokuzenzela. Ukwenza ngokwezifiso kuya kuba yintsika yorhwebo lwasemva kwe-COVID, etshintsha imeko yolindelo lwabathengi.
Iincoko, iiCRMs ezidityanisiweyo, kunye nezisombululo zedatha ezikrelekrele zinokunceda iingcali zentengiso zilawule iimfuno zazo ze-e-commerce. Idatha eyandisiweyo evela kwintengiso ekwi-Intanethi inokwenza intengiso ekrelekrele, kwaye notyalo-mali kwi-AR lubonakala ngathi lubhejo olukhuselekileyo. Ekugqibeleni, nangona kunjalo, umthengi uya kuhlala enegama lokugqibela; Ukuphila emva kwe-COVID kuxhomekeke kubathengisi ababeka (i-virtual) umthengi kuqala.
tags: Imiboniso ye-3d yemvelisoaikukubhadla okungeyonyaniNyaniso eyongeziweyoishishini ngaphakathiiingxoxoamava omnqamlezoumthengi kuqalaumthengi ophakathie-commerceeCommercege geamava adityanisiweyointengisoNgokwezifisoistatistica
UZain Jaffer nguMseki kunye ne-CEO ye Iintengiso zeZain, inkampani yotyalo mali ebonelela ngenkxaso mali kwihlabathi liphela ngeziqalo zobuchwephesha, izindlu nomhlaba kunye nokulingana kwabucala. Njengosomashishini otyaliweyo kunye notyalomali, uZain ukhuthaze ngenkuthalo kwaye utyala imali kwimida yezobuchwephesha kwimida yaseMelika.